AKHRISO: Sababta Xildhibaanadii Federaalka ee Taageersanaa Xaaf Markan u mucaaradeen | Allbanaadir News	AKHRISO: Sababta Xildhibaanadii Federaalka ee Taageersanaa Xaaf Markan u mucaaradeen
AKHRISO: Sababta Xildhibaanadii Federaalka ee Taageersanaa Xaaf Markan u mucaaradeen
Waxaa dhawaan qoraal looga soo horjeedo sida uu wax u wado Madaxweynaha maamulka Galmudug soo saaray Xildhibaanada labada Aqal ee laga soo doortay Deegaanada Galmudug.
Xildhibaanada ayaa kasoo horjeestay wax ka badan uu Madaxweyne Xaaf ku sameeyay Dastuurkii Galmudug, iyo sidoo kale khaladaad badan oo ka jira sida loo dhaqan galiyay Heshiiskii Galmudug iyo Ahlu Sunna.
Inta badan Xildhibaanadan hada kasoo horjeeda Xaaf ayaa ahaa kuwii bad baadiyay 8-bilood kahor kadib markii xiisad siyaasadeed ka dilaacday Galmudug, waxa ayna Xildhibaanadan xoog iyo xeeladba ku bixiyeen sidii Xaaf kursiga usii joogi lahaa.
Xaaf ayaa dhawaan isbadal ku sameeyay Dastuurkii Galmudug, waxa uuna kusoo darsaday qodob sheegaya in uu xilka Madaxweynaha heynayo mudo afar sano ah oo ka bilaabaneysa markii isaga la doortay halka Dastuurkii hore dhigayay in uu dhameesto waqtigii u haray Madaxweynihii ka horeeyay.
Xildhibaanada labada Aqal ee laga soo doortay Galmudug oo u badan Kooxaha Damul Jadiid iyo Daljir ayaa ka walaacsan Mustaqbalkooda siyaasadeed hadii uu Xaaf sii joogo Galmudug marka la gaaro doorashada dambe ee soo socota.
Xaaf ayaa siyaasad ahaan kasoo horjeeda inta badan Xildhibaanada Galmudug ku matala Dowlada Federaalka, waxa uuna raadinayaa fursad uu dhulka kula jaro marka la gaaro 2020-ka oo mar kale la filayo in doorasho dhacdo.
Xildhibaanadan oo intooda badan ogsoon in aysan soo noqoneyn hadii Xaaf sii maamulo Galmudug ayaa hada wada abaabul ka dhan ah Madaxweyne Xaaf loogana horjoogsanayo wax ka badalka Dastuurka ku sameeyay iyo waqtiga uu dheereestay.
Xaaf ayaan hada taageero ka heysan Xildhibaanadii horey u bad baadiyay, sidoo kale Xaaf taageero kama heesto Madaxda dowlada Federaalka, waxa kaliya uu isu haleenayo Xaaf ayaa ah Madaxda kale ee maamul goboleedyada oo mid kastaahi tiisa heysato.
Galmudug waxaa mar kale kasoo if baxay Khilaaf Siyasaadeed oo u dhaxeeya Madaxda sare ee maamulkaasi, waxaana Hogaanka Galmudug hada u kala jabeen labo garab oo xarumo u kala ah Dhuuso Mareeb iyo Cadaado.
Madaxweyne Xaaf ayaa hada rumeysan in xiisada Siyaasadeed ee soo cusboonaatay gadaal ka riixayaan Madaxda dowlada Federaalka iyo Xildhibaanada Galmudug kasoo jeeda, waxa uuna Xaaf ka shaqeenaya sidii uu mar kale xiisadan uga gudbi lahaa.
Mogadishu Somalia Muuqaalka ugu dambeeyay Magaalada Caasimaada ah